SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (25973, 25981, 25985, 25989, 25997) ORDER BY t.name ASC
နေ့စဉ်သတင်းများ – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
COVID- 19ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရန် အလှူငွေပေးအပ် လှူဒါန်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ရင်သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ် ယူရန်အတွက် အလှူငွေ ကျပ် (၁၀) သိန်းအား လက်ပံတန်းမြို့၊ စည်ပင်သာယာရေးရုံးသို့ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက သွားရောက်ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ […]
ကြီးကြပ်ရေးမှူး အဖွဲ့ရွေးချယ်ပွဲတက်ရောက်ပြီး ဆိုင်ကလုန်း Shelterမြေနေရာအား ကွင်းဆင်းပန္နက်ရိုက်ခဲ့
ဝေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီထိုက် သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဝေါမြို့နယ် ကရင်စုကျေးရွာနှင့် အဘားကျေးရွာတို့အတွက် ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ပွဲကို မြို့နယ် လဝကဦးစီးမှူး ဦးဆောင်သော ဌာနဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့များမှ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သည့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သည် ဝေါမြို့နယ်ဆင်ရွာကျေးရွာတွင် ၂၀၂၀-၂၁ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားသဘာဝဘေး ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆိုင်ကလုန်း Shelter ဆောက်လုပ်မည့် မြေနေရာအား တိုင်းဒေသကြီး ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီး ဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးဇော်ဟန်၊ တင်ဒါအောင်ဂျိမ်းဘရားသားကုမ္ပဏီ၊ ဆင်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် NLD ပါတီ ရပ်ကျေးအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်အတူ ကွင်းဆင်း ပန္နက်ရိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ […]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (25966, 25971) ORDER BY t.name ASC